07:19:49 pm 23-May-2022
युवा पोस्ट, माघ १०, २०७८, सोमबार ,
सही लगानी छनोट गर्नु र इच्छित प्रतिफल दिने लगानी योजना डिजाइन गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हुन्छ । आज हामी केही सामान्य नियमहरू जानौं जुन लगानीमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यी सामान्य नियमहरूले ठूलो मद्दत गर्न सक्छ, तर यी नियमहरू उत्पादनमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्राथमिक आधार भने हुनु हुँदैन। यसमा लुकेको कुरा ब्याजदर हो । कुनै पनि लगानी उत्पादनले तपाईंलाई आगामी वर्षहरूमा ब्याज दरको सतप्रतिशत ग्यारेन्टी दिन सक्षम हुनेछैन।
यद्यपि, यी सामान्य नियमहरूले सूचनामूलक दिशानिर्देशहरूको रूपमा सेवा गर्न सक्छन्।लगानीका लागि केही सामान्य नियमहरूको बारेमा थप जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
सामान्य नियम नं. १: ७२ को नियम
७२ को नियमले हाम्रो पैसा दोब्बर हुन कति वर्ष लाग्छ भनेर निर्धारण गर्छ।
मानौं तपाईंले वार्षिक १०% प्रतिफलको साथमा रु १,००,००० लगानी गर्नुहुन्छ। त्यसो भए कति वर्षमा पैसा दोब्बर हुन्छ ?
यस नियमका अनुसार, यदि तपाईंले ७२ लाई प्रतिफलको अपेक्षित दरले भाग गर्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो पैसा दोब्बर गर्न कति वर्ष लाग्नेछ भन्ने कुराको सही अनुमान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
दोब्बर समय . ७२ /रिटर्न दर
माथिको उदाहरणमा प्रतिफलको अपेक्षित दर १०% प्रति वर्ष हो।
दोब्बर हुन लागेको समय = ७२/१० =७.२ वर्ष
तसर्थ, तपाईंले आफ्नो लगानी ७.२ वर्षमा दोब्बर हुने अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो नियम चक्रवृद्धि ब्याज प्रस्ताव गर्ने लगानीको हकमा लागू हुन्छ। तपाइँले एक निर्दिष्ट समय सीमामा एक लगानी दोब्बर गर्न आवश्यक ब्याज दर गणना गर्न ७२ को नियम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाईं आफ्नो लगानी ६ वर्षभित्र दोब्बर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने,
दोब्बर हुने समय =७२/रिटर्नको दर
प्रतिफल दर = ७२ / दोब्बर हुने समय = ७२ / ६ = १२ प्रतिवर्ष
सामान्य नियम नं. २ :११४ को नियम
७२ को नियम जस्तै एउटै तर्क प्रयोग गरेर, यदि तपाइँ तपाइँको लगानी तीन गुणा हुन कति वर्ष लाग्छ भनेर निर्धारण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ ११४ को नियम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस नियम अनुसार, यदि तपाईंले प्रतिफलको अपेक्षित दरले ११४ लाई भाग गर्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो पैसा तेब्बर हुन लाग्ने वर्षहरूको संख्याको एकदम सही अनुमान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तेब्बर हुन लाग्ने समय = ११४ /रिटर्न दर
यदि तपाइँ प्रति वर्ष ११४ प्रतिफलको अपेक्षित दर संग रु १,००,००० /-लगानी गर्नुहुन्छ भने, तब
तेब्बर हुन लाग्ने समय ‍= ११४/१० = ११.४ वर्ष
यदि तपाईं आफ्नो लगानी ६ वर्षमा तेब्बर बनाउन चाहनुहुन्छ भने,
तेब्बर हुन लाग्ने समय = ११४/ रिटर्न दर
फिर्ताको दर = ११४/ दोब्बर हुन लाग्ने समय = ११४ /६ ‍‍=१९ प्रतिवर्ष
सामान्य नियम नं‍. नियम ३: १४४ को नियम
७२ र ११४ को नियम जस्तै एउटै तर्क प्रयोग गरेर, यदि तपाइँ तपाइँको लगानी चार गुणा हुन कति वर्ष लाग्ने निर्धारण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ १४४ को नियम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस नियमका अनुसार, यदि तपाईंले प्रतिफलको अपेक्षित दरले १४४ भाग गर्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो पैसा चौगुना हुन लाग्ने वर्षहरूको संख्याको एकदम सही अनुमान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
चौगुना हुन लाग्ने समय = १४४ / प्रतिफल दर
यदि तपाइँ प्रति वर्ष १०% को अपेक्षित दर संग रु १,००,००० लगानी गर्नुहुन्छ भने ,
चौगुना हुन लाग्ने समय ‍= १४४/१० = १४.४ वर्ष
तसर्थ, तपाईंले आफ्नो लगानी १४.४ वर्षमा तीन गुणा हुने अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो नियम चक्रवृद्धि ब्याज प्रस्ताव गर्ने लगानीको हकमा लागू हुन्छ।
यदि तपाईं ६ वर्षमा आफ्नो लगानी चार गुणा बढाउन चाहनुहुन्छ भने:
चौगुना समय = १४४ / प्रतिफल दर
रिटर्न दर = १४४ /दोब्बर हुने समय = १४४ / ६ = २४% प्रति वर्ष
सामान्य नियम नं. ४: न्यूनतम १०५ लगानीको नियम
जब हामी कमाउन थाल्छौं, बचत र लगानी हाम्रो दिमागमा पहिलो कुरा नहुन सक्छ। यद्यपि, यदि तपाइँ कम्पाउन्डिङको शक्तिबाट लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने, यो चाँडै बचत सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ। लगानीकर्ताले हालको तलबको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गरेर प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने यो लगानी नियममा उल्लेख छ ।
सामान्य नियम नं.५ः १०० र उमेर नियम
१०० बाट उमेर घटाउने नियम तपाईंलाई इक्विटी र ऋण बीचको सम्पत्ति आवंटन निर्धारण गर्न मद्दतको लागि तयार गरिएको छ। यो नियम अनुसार तपाईले आफ्नो उमेर १०० नम्बरबाट घटाउनुपर्छ। परिणाम इक्विटीमा लगानीको प्रतिशत हो जुन तपाईलाई उपयुक्त हुन सक्छ। बाँकी रकम ऋणमा लगानी गर्न सकिन्छ।
यो सामान्य नियमले सेवानिवृत्तिमा पुगेपछि व्यक्तिको इक्विटी आवंटन घट्नुपर्छ भन्ने धारणामा काम गर्छ।
मानौँ तपाईँ ३० वर्षको हुनुहुन्छ र तपाईँ लगानी सुरु गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ। १०० माइनस उमेर नियम प्रयोग गरेर, तपाईंको पोर्टफोलियोको सम्पत्ति विनियोजन यस्तो देखिन्छ ।
इक्विटी ‍=(१०० – ३)=७०%
मिति = ३०%
यद्यपि, यो वा अन्य कुनै नियमलाई अन्धाधुन्ध रूपमा स्वीकार गर्नु अघि आफ्नो उचित लगनशीलता र अनुसन्धान गर्नुहोस्।
सामान्य नियम नं‍.६ : आपतकालीन कोष नियम
जीवन अनिश्चित छ र यस्तो अवस्थामा तपाईंले आर्थिक कठिनाइहरूको लागि तयार हुन आवश्यक छ। त्यसकारण, धेरैजसो वित्तीय विशेषज्ञहरूले युवा लगानीकर्ताहरूलाई लगानी सुरु गर्नु अघि आपतकालीन कोष निर्माण गर्न सिफारिस गर्छन्। यस नियम अनुसार, तपाईंले कम्तिमा ३-६ महिनाको लागि आफ्नो सञ्चित मासिक खर्च बराबरको रकम छुट्याउनुपर्छ। यसले आपतकालीन समयमा दुर्घटना हुँदा पैसाको संकटबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ।
आपतकालिन कोषलाई यस्तो आपतकालीन अवस्थामा तरल र सजिलै पहुँचयोग्य राख्नुपर्छ।
सामान्य नियम नं.७ : ४% निकासी नियम
यो लगानी नियम भन्दा वित्तीय अनुशासन नियम हो, तर यो उल्लेख गर्न आवश्यक छ। धेरैजसो मानिसहरूले आफ्नो सेवानिवृत्ति वर्षहरूको लागि बचत गर्ने प्रयास गर्छन् र तिनीहरू पछिसम्म रहने कोष निर्माण गर्छन्। यद्यपि, मुद्रास्फीतिको अप्रत्याशित दरका कारण, कोषको समयपूर्व समाप्तिको जोखिम छ।
यद्यपि, मुद्रास्फीतिको अप्रत्याशित दरका कारण, कोषको समयपूर्व समाप्तिको जोखिम छ। ४% निकासी नियम छिटो गतिमा आफ्नो बचत खर्च नगरी सेवानिवृत्तहरूको लागि स्थिर आय प्रवाह सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो।
यस नियम अनुसार, यदि तपाईंले आफ्नो अवकाश पूँजीको ४% प्रत्येक वर्ष निकाल्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो जीवनयापनको लागत व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
नियम अनुसार, यदि तपाईंसँग एक करोड रुपैयाँको अवकाश कोष छ भने, आफ्नो जीवन व्यय व्यवस्थापन गर्न, तपाईंले वार्षिक चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी निकाल्नु हुँदैन।
नियम ७२, नियम ११४ र नियम १४४ तपाईंको लगानी क्रमशः दोब्बर, तिब्बर र चौगुना हुन सक्छ कि भनेर निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
लगानी सुरु गर्न न्यूनतम १०% नियम पालना गर्नुहोस्।
साथै, यदि तपाइँ भर्खरै आफ्नो लगानी यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ आपतकालीन कोष नियमलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ ।
१०० माइनस उमेर नियम तपाईको लगानी पोर्टफोलियोमा सम्पत्तिहरू बाँडफाँड गर्ने एक तरिका हो।
अन्तमा, ४% निकासी नियम सेवानिवृत्तहरूको लागि तिनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न लाभदायक हुन सक्छ।
माथि उल्लेखित लगानीका सामान्य नियमहरू कुनै पनि लगानीकर्ताले प्रयोग गर्न सक्ने दिशानिर्देश हुन्। यो ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ कि यी नियमहरू अन्धाधुन्ध पछ्याउनु हुँदैन।
विवेकको अभ्यास सफल लगानीकर्ताको पहिचान हो र तपाईंले लगानी सुरु गर्नु अघि तपाईंले आफ्ना विकल्पहरू अनुसन्धान गर्नुहुन्छ र लगानी सल्लाहकारसँग कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, एक राम्रो लगानी पोर्टफोलियो त्यो हो जसले तपाइँको जोखिम सहनशीलता र लगानीको अवधिलाई ध्यानमा राखेर तपाइँको वित्तीय लक्ष्यहरूमा काम गर्दछ।